China High-arụmọrụ Evaporative Condenser maka Industrial Refriji / Nzuzo Chain Usoro / HAVC System Emeputa na Supplier | Yubing
ZICE usoro evaporative condenser bụ ụdị nke nnukwu arụmọrụ ọkụ na-agbanwe ọkụ arụgharịrị ma mepụtara na ndabere nke inweta teknụzụ mgbanwe-okpomọkụ kachasị elu n'ụwa niile.
Igwe na-ekpo ọkụ na-ekpochapu mmiri na-eji mmiri na ikuku dị ka ihe dị jụụ nke na-agbanwe ikuku gas site na gas na mmiri mmiri. Alụlụ ahụ a ga-akụkọta na-ekesa site na eriri igwe, nke na-aga n'ihu na-ede mmiri n'èzí site na usoro mmiri na-agagharị. A na-afụfụ ikuku n'otu oge n'elu eriri igwe, na-eme ka obere akụkụ nke mmiri na-ekesa ekubata. Mmiri a na-ewepu okpomọkụ site na eriri igwe, dị jụụ ma na-eme ka alụlụụ dị na eriri igwe.
Igwe ndị a dabara adaba na igwe ikuku na usoro oyi oyi, na-eme ka ntụkwasị obi, arụmọrụ dị elu na ụgwọ ọrụ dị ala. ZICE ndị na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ nwere uru ndị a:
Adaba Design maka Maintenance:
Oversized ohere ụzọ na-enye mfe nnweta na unit n'ime ime kwa ụbọchị nnyocha na mmezi.
Nnyocha na mmezi na-enweghị nkwụsị:
Enwere ike nyochaa ma nwee ike idozi bọọlụ bọọlụ na dross filter na ịkwụsị ọrụ nke akụrụngwa. N'ihi ikuku na mmiri na-asọba n'okporo ụzọ yiri nke a, ọ nwekwara ike inyocha ma rụzie oghere na eriri igwe n'oge usoro ịgba ọsọ.
Systemrụ Ọrụ Kasị Elu na Kachasiri Ọnụ Ọrụ:
Jikọtara na-asọba teknụzụ na-abawanye arụmọrụ: usoro sistemụ dị ala na-eme ka mbenata ikike mgbanye ike, na-echekwa ike 15% ma e jiri ya tụnyere usoro ikuku ikuku.
Oke Nhọrọ zuru oke maka nnukwu ngwa:
Ọnụ ego zuru ezu nke nwe, ụgwọ nrụnye kachasị dị ala, na usoro kachasị mma iji bulie ohere site na ijikọta condenser ọdịnala, ụlọ elu jụrụ oyi, mgbapụta mmiri na-erugharị, bezin na njikọta ọnụ.
ZICE evaporative condenser na-anapụta arụmọrụ nke ọma na ihe dị mfe iji dobe unit n'ihi teknụzụ patent na-ebelata ụgwọ ọrụ refrigerant, njikọ na ịdị arọ nke akụrụngwa, zere ihe egwu dị ukwuu mana ka ọ dị ugbu a nnweta nke mmezi, mgbanwe na ọrụ ọrụ nke echichi abawanyela ma ọ bụ ya mere akpọrọ ya kacha ike nlereanya.
Nke gara aga: ICE MBR Membrane Module nke Industrial Wastewater Treatment for Jụrụ Tower System
Amonia Evaporative Condenser
Evaporative Condenser Nzuzo Chain
Evaporative Condenser nchekwa nchekwa.
Evaporative Condenser Manufacturer
Evaporative Condenser friji
Industrial Amonia Evaporative Condenser